Isesitokisini indoda ebifunelwa elokubulala e-KZN | News24
Isesitokisini indoda ebifunelwa elokubulala e-KZN
Durban - Igcine ikhalelwe ngamasongo kaSigonyela indoda ebifunelwa icala lokubulala "nokuba wuhlupho emphakathini".
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbhele esitatimendeni ngoLwesibili uthe, uMkhanyiseni Dlamini, 23, uvele ngoLwesihlanu eNkantolo yeMantshi yakwaMaphumulo ngecala lokuzama ukubulala. Uzogcinwa esitokisini aze aphinde avele enkantolo ngomhlaka-24 Agasti 2017.
UDlamini, ubefunwa ngabaseshi baseNsuze ngamacala okusolwa ukuthi wawenza eMahlabathini naseBhamshela.
OLUNYE UDABA:Iboshiwe indoda ngezinsolo zokushisa umuzi wentombi
"UDlamini ubandakanyeka ecaleni lokubulawa kukaNkosingiphile Gcina owatholwa enamaxeba okudutshulwa endaweni yaseMahlabathini, eNsuze, ngoFebhuwari kulo nyaka nokudububula owesilisa oneminyaka engu-24 ubudala owahlaselwa erenki yamatekisi ngenyanga edlule.
"Uyabandakanyeka nasecaleni lokubulala ngemuva kokuboshelwa ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanti kulindeleke ukuthi avele naseNkantolo yeMantshi yaseNtuzuma.
"Ungumuntu wesibili oboshelwe la macala kanti ayesebenzisana naye naye usesitokisini."
UMbhele uthe: "Umsolwa udume kakhulu ngezinsolo zokuhlukumeza umphakathi waseNsuze, kwaNgcongangconga naseBhamshela ngokusabisa ngesibhamu, ukudubula emoyeni phakathi kwemizi nokuwubamba inkunzi ewukhombe ngesibhamu, ewusabisa ngokuwenza unyamalale uma uke wabika ngaye emaphoyiseni."